ChiGerman Mbeu Mubatanidzwa: Tsika dzeGerman dzeMhando yeVarimi veMbatatisi yeRussia - "Potato System" Magazini
Solana ikambani yemhuri yanga ichibereka uye ichirima mbatatisi kubvira 1905, ichinyatso chengetedza tsika dzebhizinesi uye ichipfuudza ruzivo uye kubudirira kutsva kubva kuchizvarwa nechizvarwa.
Chinangwa chikuru chekuzadza kwaSolana kugadzira mhando dzinoyemurika uye dzinoshanda dzinoshingirira kuzvirwere zvinoverengeka zvinokonzerwa nemavhairasi, mabhakitiriya nefungi, mhando dzinopa goho rakadzikama risingashandiswi zvigadzirwa zvekuchengetedza zvinomera uye mafetiraiza. kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, nepo mhando dzakasiyaniswa nekuravira kwakanaka, inokwezva mharidzo ye tubers uye hunhu hunodiwa kumusika wemazuvano wembatatisi.
Kusarudzwa kunoitwa panzvimbo dzedu dzekuberekesa kuGerman neHolland, ayo ari munzvimbo dzakasarudzika uye mamiriro ekunze kudzivirira hutachiona nemavhairasi nezvirwere zvefungal.
Iyo SOLANA assortment inosanganisira dzakasiyana siyana dzekushandisa, nguva dzekumora, dzinoitirwa nzvimbo dzakasiyana dzemamiriro ekunze: tafura yepasirese mhando, mhando dzekuwacha, kuchenesa, kupaka, kugadzirwa kwemachipisi, mafrimu eFrance, starch, kutanga uye pakati-kutanga. Panguva ino, pane makumi maviri neshanu marudzi muHurumende Rejista yemhando dzakasiyana dzeRussian Federation.
Muna 2021, mamwe matsva maviri akanyoreswa: EDISON uye King RUSSET mhando.
Solana inopa mbatatisi yembeu kune dzinopfuura nyika makumi mana pasirese. MuRussia, nhoroondo yaSolana yakatanga kumashure muna40 neyekutanga kuendesa uye kugadzirwa kwembatatisi pamwe neveRussia vadyidzani. Muna 1991 kambani yakaendesa chikumbiro chayo chekutanga kuState Sort Commission kuti inyorese mhando itsva dzeROSARA neZEKURA. Uye yatove muna 1994, yekutanga mubatanidzwa weRussia-chiGerman bhizinesi rekugadzira mbeu mbatatisi, ZAO Samara-Solana, yakasikwa, saka Solana akave mumwe wekutanga kuona kugadzirwa kwembeu mbatatisi muRussia uye kweanopfuura makore makumi maviri nemashanu yanga ichiburitsa mbatatisi yembeu munyika medu. matapiri. Kugadzirwa kwemapatata enzvimbo kunoitwa zvine mutsindo zvinoenderana nemhando dzeGerman mhando uye zvinodiwa neGOST RF.
Iyo Solana kambani inoziva zvinodiwa nezvinodiwa mumusika weRussia uye inoita basa rekubereka uchifunga nezve izvo zvinodiwa nemutengi weRussia. Nekudaro, varimi veRussia mbatatisi nevatengi vanonyanya kufarira mhando KOROLEVA ANNA, RED LADY, LABELLA, BELMONDA yekuonekwa kwavo kwepamusoro, goho rakakura uye kuravira.
Kubva 2011, muRussia, kutengesa kwese kwakanyoreswa mhando dzeSolana kwakaitwa neGerman Seed Alliance, iyo inopa rubatsiro nekutsigira tekinoroji, kuyedza kuve nechokwadi chekubatsira kwekugadzirwa kwevatengi vedu, inoronga bvunzo dzekuratidzira kuitira kuti mutengi wega wega ayedze uye sarudza mhando dzinodhura zvakanyanya kune ivhu chairo nemamiriro ekunze, uye zvakare inogona kujairana netambo yese yeSolana mbatatisi mhando.
Nyanzvi dzeGerman Seed Alliance dzinogara dzichishamwaridzana nevatengi, kuraira nezvekusarudzwa kwemhando dzakasiyana, kupa rutsigiro rwetekinoroji, kuchinjira kuchinhu chitsva, kuyedza kuumba chipo chevarimi vembatatisi inosangana nezvinodiwa zvemusika zvazvino. Unyanzvi sevhisi uye sevhisi yakasarudzika inoita kuti kubudirira kwevatengi veGerman Seed Alliance vatengi.
Tags: Chibvumirano cheGerman Mbeumbatatisi
Kurima - kwete kurima
MaChina masayendisiti akaedza nanotechnology kudzora mbatatata